Interview with अम होङ गील
नेपाल मेरो दोश्रो जन्मभूमि हो स्वर्ग अन्त कतै छ भने त्यो नेपालमा छ- पर्वतारोही अम होङ गील - अम होङ गील
दक्षिण कोरियाली पर्वतारोही अम होङ गील संसारका ८ हजार मिटर भन्दा अग्ला १६ हिमालहरु सफलतापूर्वक आरेहण गर्ने पहिलो ब्यक्ति हुन् । सन १९८५ बाट आरोहण यात्रा शुरु गरेर २००७ मा लक्ष्य पूरा गरेका उनलाई 'ट्यांक अफ द हिमालयाज’ उपनामले पनि चिनिन्छ । कोरियाली संचार माध्यमहरुमा नेपालको प्रकृति, संस्कृति र जैविक विविधताको प्रचार प्रसारमा अहम भूमिका खेल्दै आएकाले नेपाल भित्रिने कोरियाली पर्यटक वृद्धिमा उनको योगदान प्रमुख मानिएको छ । बिगत २८ बर्षदेखी नेपाल यात्रा गरिरहेका गीलले नेपाललाई दोश्रो जन्मभूमि मान्दै आएका छन् । नागरिक स्तरमा नेपाल र कोरियाको सम्बन्ध विकासमा समेत उनको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ । दक्षिण कोरियाको ब्लु हाउस राष्ट्रपति कार्यलयसंग राम्रो सम्बन्ध भएका गील २०१० बाट नेपालमा १६ विद्यालय स्थापना गर्ने अभियानमा छन् यसै सन्दर्भमा उनीसं देवेन्द्र सम्बाहाम्फेले गरेको कुराकानी
१. तपाईको बाल्यकाल कसरी बितेको थियो बताई दिनुस न ?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
२. हिमाल चढ्ने प्रेरणा कसरी पाउनु भएको थियो ?
३. सगरमाथा आरोहण यात्रा कसरी शुरु भयो ?
सन् १९७५ सेप्टेम्बर १५ को दिन कोसाङ दोन पहिलो कोरियाली नागरिकको रुपमा सगरमाथा शिखरमा पुगेका थिए । त्यो दृश्य मैले टेलीभिजनमा हेरेको थिएँ। सगरमाथाको नाम पनि त्यहि दिन सुनेको थिएँ । त्यो दृश्य देखेर संसारमा यति सुन्दर हिमाल पनि रहेछ जस्तो लाग्यो र त्यहि दिन मैले सगरमाथा आरोहण गर्ने अठोट गरें । त्यसपछि प्रशिक्षण लिएर पहिलो पटक १९८५ को हिउद याममा आरोहण गरें तर असफल भएँ । त्यसको ठिक एकबर्ष पछाडी दोश्रो पटक आरोहण गरें । यो पटक पनि असफल मात्र होइन सहयोगी दोर्जे शेर्पा डोरी चुडिएर दुर्घटनामा पर्नु भो । उहाँको लाश अझै पाइएको छैन । आफ्नै आँखाको अगाडि साथी गुमाएपछि मानसिक रुपमा निक्कै विक्षिप्त भएँ । आरोहण यात्रा त्यागौ की जस्तो लागेको थियो तर पनि लक्ष्यबाट भाग्नु हुन्न भन्ने लाग्यो त्यसैले तेश्रो पटक १९८८ को शरद याममा आरोहण गरें र सफलता हासिल गरेको थिएँ ।
४. सगरमाथाको शिखरमा पुगेको क्षण कस्तो अनुभूति भयो ?
ओह ! ओह !! त्यो क्षणको खुशी म शब्दले ब्यक्त गर्न सक्दिन । सार्है गौरब लाग्यो । चुचुरोलाई पटक पटक चुमे ।
५. संसारका १६ अग्ला शिखरहरु चढ्ने योजना चाही कहिले कसरी बनेको हो त ?
६. प्राणलाई बाजी राखेर हिमाल अरोहणमा निस्कंदा परिवारले के भन्नुहुन्थ्यो ?
७. हिमाल आरोहणको २२ बर्ष करियरमा थुप्रै साथीहरु पनि गमाउनु भयो नि ?
(लामो उच्छवास छोड्दै) मेरो हिमाल आरोहण्ँ यात्रा १९८५ शुरु भएर २००७ मा रोकिएको छ । त्यो २२ बर्ष अवधिमा ८ हजार मिटर भन्दा उचाईका हिमालहरुको आरोहण प्रयास ३८ गरेको थिएँ तर २० पटक मात्र सफलता हासिल गरे । सगरमाथामा शिखरमा मात्र तीन पटक पुगेको थिएँ । मैले आफ्नो लक्ष्य पुरा गरे पनि यो अवधिमा १० जना सहयात्रीहरु गुमाएँ । यी मध्ये ४ जना शेर्पा र ६ जना कोरियन छन् । (फेरी लामो उच्छवास छोड्दै) आङ्खनो आँखा अघि नै साथी दुर्घटनामा पर्दा सार्है मर्माहत हुन्थे । त्यो क्षण कसैले चाहेर पनि सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । ती घटनाहरुको व्याख्या गर्ने शब्द नै छैनन् । एक प्रकारले हेर्ने हो भने म यसरी जीवित नहुनु पर्ने मान्छे हो । धेरै साथी र शुभ चिन्तकहरुले म बच्नुलाई आश्चर्य मानेका छन् । त्यति जोखिम हुदाहुंदै म बाँच्नुलाई मैले हिमालयको देन र प्रेम सम्झेको छु ।
म कोरियामा जन्मिए पनि मेरो जीवनको महत्वपुर्ण समय नेपाल मै बित्यो । अर्थात मेरो जवानी वा आधा जिबन नेपालकै पाखा पखेरा र हिमछायामा बित्यो । अर्कातिर नेपालका हिमश्रृंलाहरुले नै मलाई संसारमा चिनायो । अहिले पनि यो उकुश मुकुश शहरीया जिबन छोडेर नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिउ खेल्दै, हिंउ हेर्दै बस्न मन लागिरहेको छ । यसैले म गर्ब साथ भन्दै आएको छु - नेपाल मेरो दोश्रो जन्मभूमि हो ,दोश्रो देश हो र दोश्रो घर हो ।
हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा के हो भने कुनै पनि देश विकासित र समृद्ध हुन त्यस देशको राजनीतिमा भरपर्दछ । त्यति नै दलका नेता र कार्यकर्तामा देश र जनताप्रतिको प्रेम हुन जरुरी छ । व्यक्तिगत लाभका लागि गरिएको राजनीतिले समाज र देशको उत्थान गर्न सक्दैन । नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता रहेको छ । यो नेपाल र नेपाली लागि निक्कै हानिकारक पनि छ । देश सुधार्ने सन्दर्भमा 'स्ट्रङ लिडरसीप’को आवस्यकता पनि जरुरि हुन्छ । दक्षिण कोरियामा पार्क जङ हि जस्ता 'स्ट्रङ लिडरसीप’ भएको नेता नजन्मिएको भए आज हामी यो अवस्थासम्म आइपुग्ने थिएनौं । म नेपालको सुख र समृद्धि चाहने मान्छे भएकाले नेपालमा 'स्ट्रङ लिडरसीप’को
आवश्यकता देखेको छु ।
२०१० मा पहिलो बिद्यालय सोलुखुम्बुको पाङबोचेमा स्थापना गरेको थियौं । हालसम्म चारवाट विद्यालयको स्थापना गरिसकेका छौं । त्यस्तै पाँचौ, छैटौं विद्यालयको निर्माण कार्य २०१४ को मार्चमा पुरा गर्ने योजना रहेको छ । छैटौ बिद्यालय राष्ट्रपति रामवरण यादवको गाउँमा निर्माण भइरहेको छ । सातौ र आठौ विद्यालयको क्षेत्र पनि छनौट भइसकेकाले यसै वर्षदेखि निर्माण शुरु गर्नेछौ । यहि क्रमले आगामी पाँचदेखि आठ बर्षभित्रमा १६ वटा विद्यालय स्थापना गरिसक्ने योजना रहेको छ ।यसरि धेरै समयावधि लाग्नुको कारण पनि छ । हामीले निर्माण गरेका बिद्यालयहरु एनजीओ र आइएनजीओले निर्माण गरिदिए भन्दा फरक हुन्छन् । हामीले भवन निर्माण गर्दा त्यस क्षेत्रको तापक्रम, भू वनोट, मौसमलाई आधार मानेर डिजाइन गर्ने गरेका छौं । त्यसैले प्रत्येक बिद्यालयको भवनहरुको बनोट फरक फरक हुने गरेको छ । त्यस्तै भवनमा प्रयोग हुने समानहरुको प्रयोगमा पनि ध्यान दिने गरेका छ । त्यति मात्र नभएर बिद्यालयमा पुस्तकालय, कम्प्युटर, खेल मैदानको समेत ब्यवस्था गरिदिने गरेका छौं । त्यसपछि पनि लगातार हेरचाहर गर्ने, निगरानी गर्ने गरेका छौं । भौतिक संरचनाहरु बिग्रे भत्किए पुन निर्माण गरेका छौ । अर्को कुरा जुन जुन क्षेत्रमा स्थापना गरेका छौ, ती क्षेत्रमा कोरियाबाटै चिकित्सक र औषधि लगेर हेल्थ क्याम्पहरु संचालन गरेका छौ ।
१७. तपाई 'ब्लु हाउस’संग पनि नजिक हुनुहुन्छ । उसले नेपाललाई कसरि हेरेको पाउनुभयो ?
Views : 2115 | Date : 0000-00-00